Hondo (yekurwa) - Wikipedia
VaNyungwe vanoti nkhondo (n. war, wars) kureva hondo.
VaYao vanoti mtambo (a battle-field).
VaKikuyu vanoti kokwata (adhesion). Shona ine mazwi okuti kukwatanura kana kukwatanuka.
VaKikuyu vanoti kokwatana (adhesion).
VaKikuyu vanoti makwatano (alliance).
Izwi rokuti gutsinda (to defeat, win a case, be victorious) rinotaurwa mururimi rweKirundu. Zvichida izwi iri rinotodzana nezita rokuti Katsinde?
VaTaita vanoti nyamandu (brute).
VaTaita vanoti uta (war) vachireva hondo.
Mang'anja vanoti chipomera kana chipomere (a war-cry; war cry; noise of a multitude).
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Hondo_(yekurwa)&oldid=65546"
This page was last edited on 22 Chikumi 2019, at 17:17.